Otú iji na-Wepụ iMovie Ken Burns mmetụta
The Ken Burns mmetụta bụ a ewu ewu na aha a ụdị panning na zooming mmetụta eji na video emeputa site ka imagery. Nke a na atụmatụ enyere a ọtụtụ ebe ada Usoro nke Embedding ka foto na sinima, egosipụta na ngwa ngwa zooming na panning mmetụta, na fading ikwu n'ụzọ n'etiti okpokolo agba. Apple iMovie-enye ohere ọrụ iji Ken Burns mmetụta mgbe edezi nkiri na iMovie nke tinye na agba na flavor ka videos.
Otú ọ dị, mgbe ụfọdụ, ọtụtụ ndị na-esifịna site na nke a oké mmetụta na chọrọ iji wepụ iMovie Ken Burns mmetụta. Ya mere, isiokwu a na-ekewa abụọ na-esonụ akụkụ:
Nkebi nke 1: Olee otú iji iMovie Ken Burns mmetụta
Part 2: Olee otú iji wepụ iMovie Ken Burns mmetụta
Part 1: Olee ịgbakwunye Ken Burns mmetụta a video na iMovie
Mgbe ị na gbakwunye foto iMovie, iMovie ga-akpaghị aka tinye Ken Burns mmetụta ka photos. Mgbe ahụ, olee ịgbakwunye tinye Ken Burns mmetụta iMovie videos?
Nzọụkwụ 1. Họrọ a video na-emeghe cropping window
Họrọ a video clip na ị chọrọ itinye Ken Burns mmetụta na Project nchọgharị, wee pịa akuku bọtịnụ na menu toolbar na-ewetara ndị cropping window. Ma ọ bụ họrọ ndị video clip na see gear, họrọ "cropping, Ken Burns & adiana".
Nzọụkwụ 2. Họrọ Ken Burns na ịtọ ọnọdụ
Na-ekiri, họrọ "Ken Burns" bọtịnụ. The green rektangulu na-egosi na amalite òkè na-acha uhie uhie rektangulu-egosi na nsọtụ òkè.
Ịnwere ike ịdọrọ na resize na reposition akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha uhie uhie rektangulu n'elu òkè nke image ịtọ mmalite na ọgwụgwụ n'ókè nke Ken Burns mmetụta. Ihe mgba ọkụ icon e wezụga Malite ma ọ bụ Ọgwụgwụ pụrụ inyere gị aka ịgbanwee na-amalite na-agwụcha ebe ozugbo.
Ịnwere ike ihuchalu site ọkụkụ Preview bọtịnụ na mgbago mgbago aka nri na mgbe ị na-eche ihe niile bụ OK, pịa Emela ya.
N'ihi na photos, ị nwere ike gbanwee iMovie Ken Burns utịp ke n'otu ụzọ ahụ.
Nkebi nke 2: Olee otú iji wepụ iMovie Ken Burns mmetụta
iMovie Ken Burns mmetụta dị ukwuu, Otú ọ dị, mgbe ụfọdụ ọ na ewute.
"M dị photos n'ime oru ngo n'ọbá akwụkwọ ike a nkiri si stills ma tinye voiceover. Otú ọ dị, foto niile yiri ka mbugharị na ya na m nwere ike na-arụ ọrụ otú na-ha ka!"
Nke ahụ bụ n'ihi iMovie ga-etinye Ken Burns mmetụta foto na-akpaghị aka. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji wepụ mmetụta, ị nwere ike họrọ ihe niile foto mkpachị, nri-click na-aga mgbanwe. Na cropping window, họrọ kwesịrị ekwesị ma ọ bụ na akuku na Ken Burns mmetụta ọ ga-ewepụ.
> Resource> iMovie> Olee otú Jiri iMovie Ken Burns mmetụta na Wepụ iMovie Ken Burns